Apple ichatarisa paWindows kuvhura mafomu matsva | IPhone nhau
Apple ichatarisa paWindows kuvhura mafomu matsva
Apple iri kutsvaga software mainjiniya ekugadzira Windows mafomu, zvirinani izvi ndizvo zvinobviswa kubva kwakasiyana mabasa zvinopihwa nekambani pawebhusaiti yayo, ichivakoka kuti vabatane pamwechete kuti vagadzire chizvarwa chitsva chekushandisa midhiya kweWindows.
Nhasi, Apple inopa zvese iTunes uye iCloud kune vashandisi veWindows, zvinoshandiswa izvo chengetedza dhizaini yakafanana kubva makore mashoma apfuura uye kuti ivo vatoda kuvandudzwa, kunyanya izvozvi, pakupedzisira, uye mushure memakore mazhinji ezvikumbiro kubva kune vashandisi, yakazvipatsanura kuita akasiyana mafomu.
Iine macOS Catalina, iTunes yakanyangarika zvachose. Pane kudaro, isu tinowana izvo zvinoshandiswa Podcast, TV neMimhanzi. Hapana chimwe cheaya mafomu chinowanikwa nhasi zvakasununguka paWindows, iine iTunes iri yega nzira yekuwana zvese izvi kubva paPC.
Vanyoreri veApple TV + vachishandisa Windows havana imwe sarudzo kunze kweku Sarudza kushandisa sevhisi kuburikidza newebhu iyo yavanotipa kubva kuCupertino, nekuda kwekushaikwa kwezvakatsaurirwa kunyorera ese masevhisi. Neraki, Apple Music inowanikwa kubva kuTunes.
Basa rakasiyana rinopa iro Apple inoratidza kuratidza kuve neruzivo neUWP ipfungwa yakakosha. UWP inoreva kune Universal Windows Platform. Yakashandurwa muchiSpanish. Apple haisi yekungofarira kupa mashandisiro ayo muWindows 10 yemakomputa, asi zvakare inoda kupa mukana wevashandisi veXbox kuwana Apple TV + uye Apple Music.
Kana isu tichifunga nezve izvo zvakapihwa zvakaburitswa mazuva mashoma apfuura uye kuti Apple inotora kutora rudzi urwu rwechinhu zvakadzikama kwazvoZvichida kuti kusvika muna 2020, pakutanga, hatizove nenhau dzekutanga dzine chekuita neApple mafomu eMac atinotova nawo macOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » Apple ichatarisa paWindows kuvhura mafomu matsva
Elago anotangisa nyowani iPod-yakafuridzirwa AirPods kesi
Patent paApple Watch zvinongedzo kuFace ID